ပုရိသတွေကို ဂျွမ်းထိုးမှောက်ခုံကျစေ မဲ့ အကွက် ၄၀ (သို့) မိန်းမ တို့မာယာ (၄၀) ဖ တ်ဖြစ်အောင် ဝင်ဖတ်သွား သင့်တယ်နော် – Shwewiki.com
ပု ရိသတွေကို ဂျွမ်းထိုးမှောက်ခုံကျစေမဲ့ အကွက် ၄၀ (သို့) မိန်းမတို့မာယာ (၄၀) ဖတ်ဖြစ်အောင်ဝင်ဖတ်သွားသင့်တယ်နော် မိန်းမမာယာ သဲကိုးဖြာလို့ တင်စားသမုတ်ကြကုန်၏။
အမှန်စင်စစ်အားဖြင့် သဲကိုးဖြာ မကပေ။ စာရှိအဆို ကျမ်းရင်းလာတွင် မာယာအပါး (၄၀) ရှိပေသည်။ ယခုခေတ်အခါသမယတွင် သတ်မှတ်ကြလျှင် မိန်းမ မာယာကား အပါး (၄၀) မှပင် ကချေမည် မဟုတ်ပေ။
သို့သော် ရှိရင်းစွဲ မိန်းမမာယာတွေကိုတော့ ခေတ်လူငယ် သတို့သားတို့ သိမှတ်ဖို့ရာ တင်ပြပါမည်။ ဤအချက်အလက်များနှင့် တိုက်ဆိုင်မှုရှိနေသော မိန်းကလေးများကလည်း မိန်းမသားပီသစွာ မာယာများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ထိန်းရာ၏။ ထုတ်ဖော်ပြသရန် မသင့်ပေ။ မိမိ၏ အမူအကျင့်ထဲတွင် ပါဝင်နေသည့် အချက်အလက်များကိုလည်း ရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေကုန်လို့ ဆုတောင်းရင်းသား တင်ပြလိုက်ရပါတော့သည်။ မိန်းမမာယာ အပါး (၄၀) တကယ်မှန်ကန်တဲ့အချက်တွေလို့ မဆိုလိုပါဘူး။
မှန်တာတွေက များနေတော့ ပြောရတာ အခက်သားပဲ။ ကုဏာလဇာတ် ဘာသာပြန်နှင့် ဆရာကြီးသုခမှတ်စုတို့ကနေ ထုတ်နုတ်ထားတာပါ။ သိစေချင်ရုံသက်သက်ပါပဲ။ ဒါတွေကို မာယာလို့တော့ မပြောလိုပါဘူး။ ကျမ်းဂန်လာ စာအတိုင်း ပြန်လည် တင်ပြထားပါတယ်။ ဖတ်ရှုတော်မူကြပါကုန် . . . (၁) တင့်တယ်စံပယ်သော အမူအရာကို ပြု၏။
(၀ိဇမ္ဘတိ) (၂) တခုခုကိုချ၍ ကျောကုန်းကို မြင်စေခြင်းငှာ ကုန်း၍ကောက်၏။ (၀ိနမတိ) (၃) ဣရိယာပုတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဖီးလိမ်းပြင်ဆင်ခြင်း ဖြင့်လည်းကောင်း တင့်တယ်အောင်ပြု၏။ (၀ိလာသတိ) (၄) ရှက်ယောင်ဆောင်၏။ (၀ိလဇ္ဇတိ) (၅) လက်သည်းချင်းပွတ်၏။ (နခေန နခံဃဋ္ဋေတိ) (၆) ခြေတဖက်ဖြင့် ခြေတဖက်ကို နင်း၏။ (ပါဒေန ပါဒံ အကက္ကမတိ) (၇) တုတ်ဖြင့် မြေကို ရေးခြစ်၏။ (ကဋ္ဌေန ပထ၀ိံလေခတိ) (၈) ကလေးကိုချီမြှောက်၏။ (ဒါရကံ ဥလ္လင်္ဃတိ) (၉) ကလေးကို သူတပါးအား ချီစေ၏။ (ဒါရကံ ဥလ္လင်္ဃာပေတိ) (၁၀) မိမိက ကပြ၏။ (ကီဠတိ) (၁၁) ကလေးကို အကခိုင်း၏။ (ကီဠပေတိ) (၁၂) ကလေး၏ ပါးစသည်ကို ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်၏။ (စုမ္ဗတိ) (၁၃) ကလေးကို အစုပ်ခိုင်း၏။ (စုမ္ဗပေတိ) (၁၄) လက်ကို ဆကာ ဆကာ (နိုင်နိုင် စသည်ဖြင့်) စားဟန်ပြု၏။ (ဘုဉ္ဇတိ) (၁၅) ကလေးကို အထက်ပါ ပုံစံအတိုင်း စားစေ၏။ (ဘုဉ္ဇာပေတိ) (၁၆) တခုခုကို ကလေးအား ပေး၏။
(ဒဒါတိ) (၁၇) ကလေးလက်ကဟာကို တောင်း၏။ (ယာစတိ) (၁၈) ကလေးကို အတုလိုက်ကာ ပြောင်၏။ (ကတမနုကရောတိ) (၁၉) အသံကျယ်ကျယ်ပြော၏။ (ဥစ္စံ ဘာသတိ) (၂၀) တိုးတိုးပြော၏။ (နီစံဘာသတိ) (၂၁) တိုက်ရိုက်ပြော၏။ (အ၀ိ ၀ိစ္စံ ဘာသတိ) (၂၂) မခို့တယို့ ဘာလိုလိုပြော၏။ (၀ိ ၀ိစ္စံ ဘာသတိ) (၂၃) ကခုန်ခြင်း၊ သီချင်းဆိုခြင်း၊ ငိုခြင်းတို့ဖြင့် အရိပ်နိမိတ်ကိုပြု၏။ (နစ္စဂီတ ရောဒိတေန နိမိတ္တံ ကရောတိ) (၂၄) အသံကျယ်ကျယ် ပြင်းစွာရယ်၏။
(ဇဂ္ဃတိ) (၂၅) တစိန်းစိန်းနှင့် စိုက်ကြည့်၏။ (ပေက္ခတိ) (၂၆) ခါးကို လှုပ်စေ၏။ (ကဋိစာလေတိ) (၂၇) အတွင်းသားများကို လှုပ်စေ၏။ (ဂုယှဘဏ္ဍံ သဉ္ဇာလေတိ) (၂၈) ပေါင်ကို ဖွင့်၏။ (ဦရုံဝိ၀ရတိ) (၂၉) ပေါင်ကို ပိတ်၏။ (ဦရုံပိ ဒဟတိ) (၃၀) သားမြတ်ကိုပြ၏။ (ထနံ ဒေဿတိ) (၃၁) လက်ကတီးကို ပြ၏။ (ကစ္ဆံ ဒေဿတိ) (၃၂) ချက်ကိုပြ၏။ (နာဘိံဒေဿတိ) (၃၃) မျက်စိမှိတ် ပြ၏။ (အက္ခိံနိခနတိ) (၃၄) မျက်စပစ်၏။ (ဘမုကံ ဥက္ခိပတိ) (၃၅) သွားဖြင့် နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်၏။
(သြဋ္ဌံ ဥပလိခတိ) (၃၆) လျှာကို ထုတ်၏။ (ဇိဝှံ နိလ္လာဠေတိ) (၃၇) ထမီကို ကျွတ်ဟန်ပြု၏။ (ဒုဿံ မုစ္စတိ) (၃၈) ထမီကိုပြင်၍ ၀တ်၏။ (ဒုဿံပတိ ဗန္ဓတိ) (၃၉) ဆံထုံးကို ဖြေ၏။ (သိရသံ မုစ္စတိ) (၄၀) ဆံထုံးကို ပြင်၍ ထုံး၏။ (သိရသံ ဗန္ဓတိ) ဤသည်ကား မိန်းမတို့၏ မာယာများပေတည်း။ Credit:-(original writer လေ့လာမှတ်ယူကြကုန် #ကျော်မင်း
ပုရိသတှကေို ဂြှမျးထိုးမှောကျခုံကစြမေဲ့ အကှကျ ၄၀ (သို့) မိနျးမတို့ မာယာ (၄၀) ဖတျဖွဈအောငျဝငျဖတျသှားသငျ့တယျနျော မိနျးမမာယာ သဲကိုးဖွာလို့ တငျစားသမုတျကွကုနျ၏။
အမှနျစငျစဈအားဖွငျ့ သဲကိုးဖွာ မကပေ။ စာရှိအဆို ကမျြးရငျးလာတှငျ မာယာအပါး (၄၀) ရှိပသေညျ။ ယခုခတျေအခါသမယတှငျ သတျမှတျကွလြှငျ မိနျးမ မာယာကား အပါး (၄၀) မှပငျ ကခမြေညျ မဟုတျပေ။
သို့သျော ရှိရငျးစှဲ မိနျးမမာယာတှကေိုတော့ ခတျေလူငယျ သတို့သားတို့ သိမှတျဖို့ရာ တငျပွပါမညျ။ ဤအခကျြအလကျမြားနှငျ့ တိုကျဆိုငျမှုရှိနသေော မိနျးကလေးမြားကလညျး မိနျးမသားပီသစှာ မာယာမြားကို ထိနျးသိမျးစောငျ့ထိနျးရာ၏။ ထုတျဖျောပွသရနျ မသငျ့ပေ။ မိမိ၏ အမူအကငျြ့ထဲတှငျ ပါဝငျနသေညျ့ အခကျြအလကျမြားကိုလညျး ရှောငျရှားနိုငျကွပါစကေုနျလို့ ဆုတောငျးရငျးသား တငျပွလိုကျရပါတော့သညျ။ မိနျးမမာယာ အပါး (၄၀) တကယျမှနျကနျတဲ့အခကျြတှလေို့ မဆိုလိုပါဘူး။
မှနျတာတှကေ မြားနတေော့ ပွောရတာ အခကျသားပဲ။ ကုဏာလဇာတျ ဘာသာပွနျနှငျ့ ဆရာကွီးသုခမှတျစုတို့ကနေ ထုတျနုတျထားတာပါ။ သိစခေငျြရုံသကျသကျပါပဲ။ ဒါတှကေို မာယာလို့တော့ မပွောလိုပါဘူး။ ကမျြးဂနျလာ စာအတိုငျး ပွနျလညျ တငျပွထားပါတယျ။ ဖတျရှုတျောမူကွပါကုနျ . . . (၁) တငျ့တယျစံပယျသော အမူအရာကို ပွု၏။
(ဝိဇမ်ဘတိ) (၂) တခုခုကိုခြ၍ ကြောကုနျးကို မွငျစခွေငျးငှာ ကုနျး၍ကောကျ၏။ (ဝိနမတိ) (၃) ဣရိယာပုတျဖွငျ့လညျးကောငျး၊ ဖီးလိမျးပွငျဆငျခွငျး ဖွငျ့လညျးကောငျး တငျ့တယျအောငျပွု၏။ (ဝိလာသတိ) (၄) ရှကျယောငျဆောငျ၏။ (ဝိလဇ်ဇတိ) (၅) လကျသညျးခငျြးပှတျ၏။ (နခနေ နခံဃဋ်ဋတေိ) (၆) ခွတေဖကျဖွငျ့ ခွတေဖကျကို နငျး၏။ (ပါဒနေ ပါဒံ အကက်ကမတိ) (၇) တုတျဖွငျ့ မွကေို ရေးခွဈ၏။ (ကဋ်ဌနေ ပထဝိံလခေတိ) (၈) ကလေးကိုခြီမွှောကျ၏။ (ဒါရကံ ဥလ်လင်ျဃတိ) (၉) ကလေးကို သူတပါးအား ခြီစေ၏။ (ဒါရကံ ဥလ်လင်ျဃာပတေိ) (၁၀) မိမိက ကပွ၏။ (ကီဠတိ) (၁၁) ကလေးကို အကခိုငျး၏။ (ကီဠပတေိ) (၁၂) ကလေး၏ ပါးစသညျကို ပါးစပျဖွငျ့ စုပျ၏။ (စုမ်ဗတိ) (၁၃) ကလေးကို အစုပျခိုငျး၏။ (စုမ်ဗပတေိ) (၁၄) လကျကို ဆကာ ဆကာ (နိုငျနိုငျ စသညျဖွငျ့) စားဟနျပွု၏။ (ဘုဉ်ဇတိ) (၁၅) ကလေးကို အထကျပါ ပုံစံအတိုငျး စားစေ၏။ (ဘုဉ်ဇာပတေိ) (၁၆) တခုခုကို ကလေးအား ပေး၏။
(ဒဒါတိ) (၁၇) ကလေးလကျကဟာကို တောငျး၏။ (ယာစတိ) (၁၈) ကလေးကို အတုလိုကျကာ ပွောငျ၏။ (ကတမနုကရောတိ) (၁၉) အသံကယျြကယျြပွော၏။ (ဥစ်စံ ဘာသတိ) (၂၀) တိုးတိုးပွော၏။ (နီစံဘာသတိ) (၂၁) တိုကျရိုကျပွော၏။ (အဝိ ဝိစ်စံ ဘာသတိ) (၂၂) မခို့တယို့ ဘာလိုလိုပွော၏။ (ဝိ ဝိစ်စံ ဘာသတိ) (၂၃) ကခုနျခွငျး၊ သီခငျြးဆိုခွငျး၊ ငိုခွငျးတို့ဖွငျ့ အရိပျနိမိတျကိုပွု၏။ (နစ်စဂီတ ရောဒိတနေ နိမိတ်တံ ကရောတိ) (၂၄) အသံကယျြကယျြ ပွငျးစှာရယျ၏။
(ဇဂ်ဃတိ) (၂၅) တစိနျးစိနျးနှငျ့ စိုကျကွညျ့၏။ (ပက်ေခတိ) (၂၆) ခါးကို လှုပျစေ၏။ (ကဋိစာလတေိ) (၂၇) အတှငျးသားမြားကို လှုပျစေ၏။ (ဂုယှဘဏ်ဍံ သဉ်ဇာလတေိ) (၂၈) ပေါငျကို ဖှငျ့၏။ (ဦရုံဝိဝရတိ) (၂၉) ပေါငျကို ပိတျ၏။ (ဦရုံပိ ဒဟတိ) (၃၀) သားမွတျကိုပွ၏။ (ထနံ ဒဿတေိ) (၃၁) လကျကတီးကို ပွ၏။ (ကစ်ဆံ ဒဿတေိ) (၃၂) ခကျြကိုပွ၏။ (နာဘိံဒဿတေိ) (၃၃) မကျြစိမှိတျ ပွ၏။ (အက်ခိံနိခနတိ) (၃၄) မကျြစပဈ၏။ (ဘမုကံ ဥက်ခိပတိ) (၃၅) သှားဖွငျ့ နှုတျခမျးကို ကိုကျ၏။
(သွဋ်ဌံ ဥပလိခတိ) (၃၆) လြှာကို ထုတျ၏။ (ဇိဝှံ နိလ်လာဠတေိ) (၃၇) ထမီကို ကြှတျဟနျပွု၏။ (ဒုဿံ မုစ်စတိ) (၃၈) ထမီကိုပွငျ၍ ဝတျ၏။ (ဒုဿံပတိ ဗန်ဓတိ) (၃၉) ဆံထုံးကို ဖွေ၏။ (သိရသံ မုစ်စတိ) (၄၀) ဆံထုံးကို ပွငျ၍ ထုံး၏။ (သိရသံ ဗန်ဓတိ) ဤသညျကား မိနျးမတို့၏ မာယာမြားပတေညျး။ Credit:-(original writer လလေ့ာမှတျယူကွကုနျ #ကြျောမငျး
“တူနှစ် ကိုယ်ကြား ပြော စကားလေးတွေ ကို ပရိသတ်ကြီး ကို ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့မအေးသောင်း”